1. धेरै व्यक्ति पूर्ण आंकडाको रहस्य खोज्दैछन्। जवानीको सिंहासनको साथ कसरी पेटको बोसो गुमाउने राम्रो आकारमा छिर्दै। त्यो युवा फिर्ता पाउनुका साथै प्रत्येक स्टाइलमा उत्तम हुने कपडा लगाएर सेक्नेस थप्नुहोस्। साथै राम्रो स्वास्थ्य द्वारा अनुसरण गरिएको हामीलाई बाहेक अरू कसैले दिन सक्दैन आज हामीसँग एक सरल चरण छ, तर यसको लागि अलि धैर्य र अनुशासन चाहिन्छ। यदि तपाइँ यसलाई पास गर्नुभयो भने, तपाइँ ग्यारेन्टी हुनुहुनेछ कि तपाइँको सुन्दर आकृति निश्चित रूपमा फिर्ता हुनेछ।
2. प्रत्येक खाना अघि ठूलो गिलास सफा पानी पिउनुहोस्। यो विधि, तपाईंको छाला सुन्दर बनाउनुको साथै मलिन प्रणाली हामीलाई अविश्वसनीय छिटो भर्न पनि मद्दत गर्दछ किनकि पानी शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग हो दिन को समयमा स्फूर्ति र पानी पिउन - - १० मिनेट प्रत्येक खाना खानु भन्दा पहिले। हामीलाई धेरै छिटो पिउने बनाउँदछ किनभने पहिले खानाको कारण प्यानमा पानी सारिएको थियो तर मैले यसलाई नियमित आधारमा बानी बनाउनुपर्दछ। तपाईले पेटको बोसो कसरी गुमाउने भनेर देख्नुहुन्छ? गाह्रो छैन
3. खान छनौट गर्नुहोस् बुझेको उपयोगी जब पेट आउन शुरू हुन्छ यसले देखाउँछ कि खाना छनौटमा हाम्रो पोषण धेरै हदसम्म उपेक्षित गरिएको छ, हैन? यो ठीक छ, सँधै सुरू गर्नुहोस्। सावधानीपूर्वक खाना छनौटहरूको साथ, जुन पेटको बोसो घटाउने विधिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ पहिलो कुरा सफ्ट ड्रिंकबाट अलग रहनु हो। उच्च चिनी डेसर्टहरू कम स्टार्चयुक्त खानाहरू खानुहोस्। वा उपयोगी पिठमा स्विच गर्नुहोस् जस्तै सम्पूर्ण अन्न वा रोटी, हरेक खानामा मध्यम गहुँ रोटी यदि यो चामल छ भने, त्यसपछि प्रत्येक खाना मा एक पुरानो। प्रोटिन खाद्य पदार्थहरू थप्नुहोस् जुन क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरू मर्मत गर्न आवश्यक छ। र अधिक फाइबरको साथ खाना नबिर्सनुहोस् के खानाहरू तपाईंको शरीरको लागि काम गर्दछ। यो सँधै भरपर्दो उद्धरण हो। आउनुहोस् आज भन्दा राम्रो शरीरमा केही उपयोगी हुने छनौट गरौं।
4. एक शारीरिक गतिविधि छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँ रमाईलो गर्नुहुन्छ र यसलाई नियमित रूपमा गर्नुहुन्छ। सयौं मानिसहरू उस्तै तरीकाले व्यायाम गर्न मन पराउँदैनन्। त्यसैले म त्यसमा ध्यान दिन चाहन्न यो कुनै व्यायाम वा कस्तो प्रकारको व्यायाम हुनुपर्दछ, केवल अनुरोध गर्नुहोस् कि यो हामीले मनपराउने व्यायाम हो। र यो नियमित रूपमा गर्नुहोस्, हप्तामा -5--5 दिन, सुविधाको आधारमा तर उमेर र शारीरिक तन्दुरूस्तीको आधारमा to० मिनेट देखि १ घण्टा सम्म लगातार गर्न जरूरी छ केहि मानिस जस्तै हिड्न, दौड, योग, नाच, साइकल चलाउने, पौडी खेल्ने, कार्डियो, आदि। म भन्छु कि यदि तिनीहरू नियमित रूपमा गर्छन् भने। र अन्य व्यवहार संगै बेली फ्याट घटाउने तरीकाका लागि हतार नगरी बेली फ्याट बिस्तारै कम हुनेछ, स्वस्थको पछि र स्पष्ट रूपमा प्रतिभा
5. आशावादी हुनुहोस् तनाव कम गर्नुहोस् तपाईको सकारात्मक उर्जा र EQ नियमित रूपमा बढाउनुहोस्। यो गर्न सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो। विचार, भावना, वा तनाव नियन्त्रण गर्न प्रयासमा जबसम्म हामी मानव र जीवित छौं तर चीजहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् संसारमा केहि पनि निश्चित छैन खुशी छिट्टै हामीसँग थियो। दुःखकष्ट आउँदछ र चाँडै बितेर जान्छ। प्रत्येक समस्याको समाधान हुन्छ, सचेत रहनुहोस्। र विश्राम को समयमा आफैलाई सकारात्मक ऊर्जा दिनुहोस् अस्थायी रूपमा बोझ छोड्नुहोस् र पहिले तपाईंको शरीरको देखभालमा ध्यान दिनुहोस्। तनावले हामीलाई चोट नपु .्याउनुहोस्। जति अधिक तनावपूर्ण तपाईले खानुहुन्छ जति बढी तनाव, झन् निराश अझ महत्त्वपूर्ण कुरा तनाव हो हरेक रूप मा हाम्रो स्वास्थ्य संग दुश्मन
6. सरल, कुनै पनि गाह्रो छैन, वास्तवमा, यसले आफ्नो हेरचाह गरिरहेको छ। आफैलाई माया गर्न आउँदछ र आफूलाई राम्रो चीजहरू फेरि दिनुहुन्छ तर नियमित अभ्यास आवश्यक छ किनभने राम्रो स्वास्थ्य बिक्रीको लागि छैन यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ आफैले यो गर्नु पर्छ।